လီဗာပူးလ္ အိမ္ကြင္းမွာ ေနာက္ဆုံးရွုံးခဲ့တုန္းက ကမၻာႀကီးမွာ ဘာေတြမျဖစ္ေသးဘူးလဲ??? - MySport Myanmar
လီဗာပူးလ္ အိမ္ကြင္းမွာ ေနာက္ဆုံးရွုံးခဲ့တုန္းက ကမၻာႀကီးမွာ ဘာေတြမျဖစ္ေသးဘူးလဲ???
ယေန႔ည ၁၁နာရီအခ်ိန္ လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ့ နာမည္ေက်ာ္ အန္ဖီးလ္ကြင္းႀကီးထဲမွာေတာ့ ပရီမီးယားလိဂ္ရဲ့ အေအာင္ျမင္ဆုံး အသင္းေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ လီဗာပူးလ္အသင္းနဲ႔ မန္ခ်က္စတာ ယူနိုက္တက္အသင္းတို႔က ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
လီဗာပူးလ္အသင္းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ရွုံးပြဲမေတြ႕ၾကဳံေသးတဲ့ အသင္းျဖစ္သလို ၊ လက္ရွိရာသီမွာလည္း သေရပြဲတစ္ပြဲသာ ၾကဳံေတြ႕ထားၿပီး အဆိုပါ သေရပြဲဟာလည္း ယူနိုက္တက္အသင္းနဲ႔ ပထမအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာ ရရွိခဲ့တာပါ။ တစ္ဖက္မွာလည္း ယူနိုက္တက္အသင္းဟာ ရွုံးပြဲမရွိဆိုတဲ့ စံခ်ိန္မွတ္တမ္းေတြကို ခ်ိဳးဖ်က္ေလ့ရွိတဲ့ အသင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီပြဲစဥ္မွာ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို ပရိသတ္ေတြက စိတ္ဝင္စားေနၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အန္ဖီးလ္ကြင္းဟာ လီဗာပူးလ္ရဲ့ ေအာင္ေျမျဖစ္သလို အိမ္ကြင္းမွာ အမွတ္ေပးပြဲကို လီဗာပူးလ္အသင္း မရွုံးနိမ့္ခဲ့တာဟာလည္း အေတာ္ေလးကို ၾကာျမင့္ခဲ့ပါၿပီ။ တိတိက်က် ေျပာရရင္ေတာ့ လီဗာပူးလ္အသင္းဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ရက္ေန႔မွာ ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ အသင္းကို ၁-၂ ဆိုတဲ့ရလဒ္နဲ႔ ရွုံးနိမ့္ခဲ့တာဟာ ေနာက္ဆုံးအိမ္ကြင္းရွုံးပြဲျဖစ္ၿပီး ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ ယူနိုက္တက္အသင္းက လီဗာပူးလ္ကို ရွုံးပြဲ ေတြ႕ၾကဳံေအာင္ စြမ္းေဆာင္ျပနိုင္မလားဆိုတာက စိတ္ဝင္စားစရာပါပဲ။
ဒါေပမယ့္ လီဗာပူးလ္အသင္း အိမ္ကြင္းမွာ ရွုံးပြဲ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရတုန္းက ဒါေတြမျဖစ္ေသးပါဘူး…
⁃ အိုင္ဖုန္းသုံးလုံး မေပၚေသးဘူး
⁃ ယူနိုက္တက္အသင္း ယူရိုပါလိဂ္မရေသးဘူး
⁃ ယူနိုက္တက္ရဲ့ အမ်ိဳးသမီးအသင္း မေပၚေသးပါဘူး
⁃ VARကို ေဘာလုံးေလာကမွာ မသုံးေသးပါဘူး
⁃ Marvelရဲ့ Super Heroes ဇာတ္ကား ၉ကား မထြက္ေသးပါဘူး
⁃ မိုရက္စ္တစ္ေယာက္ ပရီးမီးယားလိဂ္ကို ျပန္ေရာက္မလာေသးဘူး
⁃ အဂၤလန္က EUကေန မထြက္ေသးဘူး
⁃ ဝိန္းရြန္းနီတစ္ေယာက္ ယူနိုက္တက္ကေန မထြက္ေသးပါဘူး
ယနေ့ည ၁၁နာရီအချိန် လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ နာမည်ကျော် အန်ဖီးလ်ကွင်းကြီးထဲမှာတော့ ပရီမီးယားလိဂ်ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး အသင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းနဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းတို့က ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ လက်ရှိအချိန်အထိ ရှုံးပွဲမတွေ့ကြုံသေးတဲ့ အသင်းဖြစ်သလို ၊ လက်ရှိရာသီမှာလည်း သရေပွဲတစ်ပွဲသာ ကြုံတွေ့ထားပြီး အဆိုပါ သရေပွဲဟာလည်း ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ ပထမအကျော့ပွဲစဉ်မှာ ရရှိခဲ့တာပါ။ တစ်ဖက်မှာလည်း ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ရှုံးပွဲမရှိဆိုတဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေကို ချိုးဖျက်လေ့ရှိတဲ့ အသင်းဖြစ်တာကြောင့် ဒီပွဲစဉ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို ပရိသတ်တွေက စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အန်ဖီးလ်ကွင်းဟာ လီဗာပူးလ်ရဲ့ အောင်မြေဖြစ်သလို အိမ်ကွင်းမှာ အမှတ်ပေးပွဲကို လီဗာပူးလ်အသင်း မရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဟာလည်း အတော်လေးကို ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။ တိတိကျကျ ပြောရရင်တော့ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၃ရက်နေ့မှာ ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် အသင်းကို ၁-၂ ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဟာ နောက်ဆုံးအိမ်ကွင်းရှုံးပွဲဖြစ်ပြီး ဒီတစ်ကြိမ်မှာ ယူနိုက်တက်အသင်းက လီဗာပူးလ်ကို ရှုံးပွဲ တွေ့ကြုံအောင် စွမ်းဆောင်ပြနိုင်မလားဆိုတာက စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် လီဗာပူးလ်အသင်း အိမ်ကွင်းမှာ ရှုံးပွဲ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတုန်းက ဒါတွေမဖြစ်သေးပါဘူး…
⁃ အိုင်ဖုန်းသုံးလုံး မပေါ်သေးဘူး
⁃ ယူနိုက်တက်အသင်း ယူရိုပါလိဂ်မရသေးဘူး
⁃ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အမျိုးသမီးအသင်း မပေါ်သေးပါဘူး
⁃ VARကို ဘောလုံးလောကမှာ မသုံးသေးပါဘူး
⁃ Marvelရဲ့ Super Heroes ဇာတ်ကား ၉ကား မထွက်သေးပါဘူး
⁃ မိုရက်စ်တစ်ယောက် ပရီးမီးယားလိဂ်ကို ပြန်ရောက်မလာသေးဘူး
⁃ အင်္ဂလန်က EUကနေ မထွက်သေးဘူး
⁃ ဝိန်းရွန်းနီတစ်ယောက် ယူနိုက်တက်ကနေ မထွက်သေးပါဘူး
MySport Myanmar2020-01-19T09:50:44+06:30January 19th, 2020|Football, Premier League|